Gazetiboky anaty tambajotra, an-jazavavy 11 taona, miresaka fanatanjahantena ataom-behivavy · Global Voices teny Malagasy
'Raha vitany, Vitanao' — ampiakarin'ny Her Way ho ambony ny tsivalana
Voadika ny 30 Novambra 2021 18:59 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Italiano, Português, বাংলা, Español, Română , English
Pikantsary — Fantaro ilay zazavavy 11 taona nanomboka ny gazetibokiny | Studio 10 video
Anatina tantara hafa miresaka hasambarana avy any ambany any, ny tanora aostraliana no mpisava làlana. Ankizivavy aostraliana iray, 11 taona, avy ao Sydney, no namorona gazetiboky iray an-tambajotra momba ny fanatanjahantena iraisampirenena ataom-behivavy.
Nanapa-kevitra i Abbie ny handray io zotra io taorian'ny nahitàny fa tsy misy mihitsy gazetiboky ho an'ny ankizivavy. Araka izany dia noforoniny ny Her Way:
Her Way Laharana 1, Oktôbra 2021 — Sary natolotr'i Abbie (Her Way Magazine)
Misanda ny farany ambany indrindra izy io, 2 dôlara aostraliàna (1.50 US dollars) ary ny antsasany dia atolotra ho an'ny antso “Empower Girls Through Cricket” an'ny UNICEF Aostralia.
Fantaro ilay ankizivavy 11 taona namorona ny gazetiboky Her Way hilazàna ireo tantara momba ny fanatanjahantena ataom-behivavy https://t.co/mHRkz7INUm
— Genevieve Poole (@GenevievePool12)
Katie Brown, mpilalao rugby milalao ao amin'ny South Sydney Football Club, dia nitafa tamin'i Abbie mba hatao ao amin'ny podcast-ny “Real Talk“.
Raha te-hahazo podcast mahasambatra ianao, fantaro i Abbie, ilay ankizivavy namorona ny @HerwayMagazine
11 taona izy ary avo fikendry! ???
Misaotra nitafa tamiko tao amin'ny “Real Talk” – tantara feno ??https://t.co/vovlbcxhtq pic.twitter.com/1K3z0MQRTh
— Katie Brown ??‍♀️ (@katiebrownaus)
Nampahafantarina tao amin'ny Studio 10-n'ny Ten Network ihany koa i Abbie :
Ankoatra ilay gazetiboky, ny Her Way dia manana kaonty Facebook, Instagram sy Twitter. Voarindra eo ambany “fanarahamason'ny ray aman-dreny” izy ireny.
Tsy zavatra vaovao amin'i Abbie ny tazana eny afovoan'ny sehatra. Fony valo taona tamin'ny 2019, dia efa natolotra ho Auskicker -n'ny taona izy tao amin'ny Australian Football League (AFL), niseho tamina antsafa iray narahan'olona 7 tapitrisa tao amin'ny TV nasiônaly. Hita ato ny dika ao amin'ny Youtube.
Tamin'io taona io izy dia nilalao ihany koa tao amin'ny Melbourne Cricket Ground nandritra ny antsasa-potoana filalaovana tamin'ny famaranana ny AFL. Taoriana kely i Abbie dia nanolotra medaly iray, nivazivazy tamin'ilay mpilalao nahazo izany, nanao hoe “tsara kokoa ho ana ankizilahy iray ianao”. Ambarany ao anatin'ny Laharana 1 amin'ilay gazetiboky ny tantara feno.
Fanolorana medaly tamin'ny famaranana AFL 2019 — Sary natolotr'i Abbie (Her Way Magazine)
Tamin'ny sehatra samihafan'ny fanatanjahantena, nanolo-tànana ho an'ireo kintana iraisampirenena i Abbie. Hannah Green, Aostraliàna mpilalao golf ary nahazo ny Tompondaka Vehivavy PGA tamin'ny 2019, no nasongadina tao anatin'ny laharana voalohany, miaraka amina antsafa lalindalina kokoa any anatin'ireo laharana manaraka ho avy.
Ity bitsika manintona ity, fampitandremana ireo mpankafy momba ny fiovàm-potoana noho ny ora lohataona, dia nahazo fankasitrahana avy amin'ny ekipa aostraliàna mpilalao cricket:
Fampahatsiahivana tsara !!
Misy olomalaza hafa koa mpankafy azy:
OMG (Andriamanitra ô!) tia ny bitsika nataoko i @Anthony_Wiggle. Dimy taona lasa izao, nitafy toa an'i Emma izaho sy ny rahavaviko tao amin'ny seho Wiggles
— HerWay_Magazine (@HerwayMagazine)
Vonona i Abbie hiantso ireo mpilalao goavana amin'ny resaka fandrakofana hetsika fanatanjahantena. Ity bitsika ity dia mikendry mibaribary ireo laharam-pahamehan'ny fantsom-pahitalavitra nasiônaly iray:
Nahoana no tsy ny vehivavy fa ny soavaly no nosafidiana? #7spor
Manana mpankafy azy marobe ety anaty tambajotra izy, izay miombon-kevitra aminy :
Tanatin'ny herinandro iray izay nanombohan'ny ankizivavy iray 11 taona ny gazetiboky iray ho an'ny fanatanjahantena ataom-behivavy (tena mampahazo aina) @HerwayMagazine , tantara kely 2 monja no mba vitan'ny @SMHsport nosahanina momba ny fanatanjahantena ataom-behivavy – ½ pejy amin'ireo 14 pejy
— Nic Wakefield Evans (@Nicwe)
Nanontanian'ny Global Voices i Abbie momba ilay gazetiboky sy ny tenany.
Kevin Rennie (KR): Maninona ianao no nisafidy ny endrika gazetiboky anaty tambajotra ho an'ny zavatra nataonao?
Abbie: Tany am-piandohana dia tena gazetiboky mihitsy no niriako hatao, satria tia manangona gazetiboky aho. Saingy nanapa-kevitra izahay ny hanao izay hahatongavany any amin'ny olona rehetra anatin'ny fotoana haingana sy hitazona ny sandam-pamokarana azy ho ambany dia ambany, ny anaty tambajotra no tsara indrindra. Sady koa, manana efijery daholo izao ny tanora rehetra, araka izany dia fomba iray tsotra hamakiana azy io.
KR: Ahoana no firafitry ny ekipanao? Avy aiza no fiavian'ny fanohanana ara-teknika?
Abbie: Izahay sy ny raiko no tena ao. Manampy kely amin'ny asa fikarohana izy, ary ny saripika rehetra dia ireo izay nopihany rehefa mandeha mijery lalao izahay na mihaona aman'olona. Neny no manao vakiteny fanamarinana sy nanao betsaka tamin'ny fividianana ny tranonkala.
KR: Inona no drafitra hafa nomaninareo, na ho anareo manokana izany, na ho an'ny daholobe, toy ny hoe dingam-pianarana / asa?
Abbie: Tsy tena mbola mahazo antoka momba ny asa aho. Tena nanome hevitra ahy tokoa ity momba ny firotsahana amin'ny asa fanaovana gazety momba ny fanatanjahantena raha tsy hoe lasa mpanao fanatanjahantena matianina aho. Nefa koa ho te-hiasa miaraka amin'ireo olona tsy mandre tsara, ny biby na ankizy. Betsaka ny zavatra tiako hatao.
KR: Toy ny ahoana ny zavatra tsapa rehefa hoe miantso ireo mpisehatra amin'ny media goavana?
Abbie: Nataoko fotsiny io satria zavatra iray mahaliana ahy, ary dia zavatra iray tiako vakiana no noforoniko, ary nihevitra aho fa mety ho afaka manao izany koa na ny olona hafa aza. Tsy mbola tena nihevitra zavatra hafa momba azy io aho
KR: Manana fanehoankevitra hafa ve ianao momba ny làlana nodiavin'ny HerWay hatreto?
Abbie: Tena goavana tokoa tsy araka ny noheveriko ny fanehoankevitra. Angamba 20 no olona noheveriko fa mety ho tia azy io. Sangy tena mahafinaritra fa tsy noheverina ny hahita olona avy amin'ny lafivalon'ny tany mividy ilay gazetiboky, sy ny mahita olona maniry ny hitafa amiko.
Ny fandraharahana ataon'i Abbie dia mitranga ihany koa ao anatin'ny fotoana isian'ireo tanora hafa aostraliàna manaitaitra ny ety anaty tambajotra: Tanora telo avy ao Melbourne no lasa iangampanahy ho an'ny daholobe noho ilay tranonkalan-dry zareo nataony hanarahana ireo angondrakitra momba ny COVID-19.
Mahafinaritra ny mahita ireo tanora manokatra ny lalàna ho an'ny hoavin'ny Aostraliàna. Manao zavatra mampitolagaga i Abbie!